कहाँ घुम्न जाने ! श्रीअन्तु ? (फोटो फिचर)
Thu, Jul 19, 2018 | 21:06:15 NST
19:45 PM (6months ago )
इलाम , पुस २३ –मौसममा सुधार आउनु, सूर्योदय हुनु, पर्यटकका लागि भाग्योदय हुनु जस्तै हो । पर्यटक सँगसँगै होटल व्यवसायीको पनि उस्तै भएको छ भाग्य । व्यवसायीहरूको यतिबेला उज्यालो चेहरा देख्न पाइन्छ । कारण मौसम बाधक बनी दिएको छैन ।
मेची राजमार्ग इलामको फिक्कलबाट १४ किमीको दूरी पार गरेपछि श्रीअन्तु पुगिन्छ । हिँड्दा अलि साहसी हुनु परे पनि पुगेपछि थकान पलभरमै मेटाउन सकिन्छ । श्रीअन्तुमा पर्यटक आगमन बढेसँगै व्यापार व्यवसाय पनि बढेको अन्तु पर्यटन परिसरभित्र पसल संचालन गर्ने संचालकहरुको भनाई छ ।
समुन्द्री सतहबाट एक हजर आठ सय २८ मिटरको उचाइमा रहेको श्रीअन्तुबाट गाउँको रमणीय दृश्य ,सूर्योदयको दृष्यावलोकन, भारतका सुन्दर शहरहरुको दृश्यावलोकन, नेपाल, भारतका विभिन्न हिमश्रृङखलाहरु नियाल्न पाइने मेची पहाडी पर्यटन प्रवर्धन विकास समितीले जनाएको छ ।
यस्तै नेपालको सबैभन्दा होचो ठाउँ केचना र ताप्लेजुङ्का विभिन्न ठाउँसमेत देखिनुका साथै पारिवारिक वातावरण, स्थानीय परिकार, डुङ्गामा चढेर अन्तु पोखरीको सयर गर्न समेत पाइने भएकाले पनि श्रीअन्तु पर्यटकका लागि लोकप्रिय बन्दै गएको छ ।
यसका साथै पोखरी आसपास दैनिक १० देखि २० को हाराहारीमा गाडीहरु पिक्निक खान आउने गरेका छन् । अन्तु पोखरीमा डुंगा सयर गर्न पाउँदा पर्यटकहरु झन् लोभिने गरेका डुंगा चालकको भनाई छ ।
२०६० साल यता पर्यटक प्रवद्र्धनका लागि सकृय अन्तुबासीले पर्यटकका लागि होमस्टे सञ्चालनमा ल्याएका छन् । अहिले दैनिक १०० को हाराहारीमा पर्यटकहरु बस्ने गरेको होमस्टेकी बिनिता प्रधान बताउनुहुन्छ ।
यो समय होमस्टे सञ्चालक अन्तुबासीले मनग्य आम्दानी लिइरहेका छन् । यस स्थललाई विश्वसामु चिनाउन सके थप फाइदा लिन सकिने स्थानीयको भनाई छ ।
अन्तुको पर्यटन विकासका लागि मेची पहाडी पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समितिले सहयोग गर्दै आएको छ । सरकारको उचित सहयोग र प्राकृतिक श्रोत साधनको समुचित उपयोग गर्न सके श्रीअन्तु लोकप्रिय पर्यटकीय केन्द्र बन्ने निश्चित रहेको समाजशास्त्रीहरुको भनाई छ ।
श्रीअन्तुसँगै जिल्लाका अन्य पर्यटकीय स्थल सन्दकपुर, पशुपतिनगर, कन्याम, अन्तु, माइपोखरी, जौबारी र पाथीभरा लगायतमासमेत पर्यटकको चाप बढ्न थालेको छ ।